Akụkọ - Nyocha banyere ọnọdụ mmepe na atụmanya ahịa nke ụlọ ọrụ na-echedo aka na 2021
Ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ka ekpughere ha na ọnọdụ ọrụ dị egwu dị ka nrụrụ kemịkal, radieshon eletriki, akụrụngwa akụrụngwa, na akụrụngwa eletrik n'oge nrụpụta ma ọ bụ arụmọrụ.
Site na mmepe mmepe na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gburugburu ọrụ ọrụ na-adịwanye mgbagwoju anya, na ihe egwu nke mmerụ ahụ n'aka n'oge ọrụ ọrụ na-aga n'ihu na-abawanye ma na-egosi usoro mmepe dịgasị iche. Iji gbochie ma ọ bụ belata mmerụ dị iche iche kpatara ihe mberede ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ọghọm ọrụ.
Dịka akụkụ nchekwa dị iche iche si dị, akụrụngwa nchedo onwe gị gụnyere nchedo aka, nchedo ahụ, nchedo iku ume, nchedo isi, nchedo ụkwụ na ngwaahịa ndị ọzọ, dịka uwe aka, akwa nchekwa, ihe nkpuchi iku ume, okpu agha, ihe mkpuchi ntị, enyo anya, akpụkpọ ụkwụ nchekwa na ngwaahịa ndị ọzọ. .
Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, mmerụ aka na-akpata ọnụọgụ dị elu nke ihe ọghọm metụtara ọrụ, na-ede ihe dịka 1/4 nke ọnụ ọgụgụ ihe ọghọm metụtara ọrụ. Ha n'ozuzu ha gụnyere mmerụ ahụ, mmerụ ahụ, mmerụ kemịkal na ọnya ọrịa. , Cutcha, mpịakọta, acupuncture na mmerụ ahụ ndị ọzọ bụ ndị kachasị. Dị ka otu nnyocha nke Free Joint Research Organisation nke United States na vardlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ọha na Harvard na-eduzi, iyi uwe nchebe kwesịrị ekwesị nwere ike belata 60 mmerụ aka mberede. N'otu oge, ogwe aka nchedo kwesịrị ekwesị enweghị ike ọ bụ naanị chebe nchekwa nke aka, kamakwa ọ nwere ike melite ọrụ nke aka na gburugburu ebe ọrụ pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, gloves nitrile nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee nchebe na ịdị mfe iji metụ aka n'oge usoro mmepụta. Chemicals, mmanụ stains, wdg.
Uwe nchebe nchebe nwere oke ahịa kachasị elu n'ọhịa nke ngwaahịa nchebe ọrụ n'ihi ubi ha bara ụba, ọnọdụ dịgasị iche iche na nnukwu igwe mmadụ. Dabere na "China Labour Protection Products Industry Big Data", ahịa òkè nke mba m n'aka nchekwa nchedo ngwaahịa na oru nchedo ụlọ ọrụ karịa 30%.
Post oge: Feb-25-2021